Curacao neAruba vanoramba kupinda muOdyssey yeMakungwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Curacao neAruba vanoramba kupinda muOdyssey yeMakungwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Kurwisa • Health News • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Ngarava itsva yeRoyal Caribbean yemhando yepamusoro yakatanga kubva kuFort Lauderdale, Florida muna Zvita 18 rwendo rwehusiku husere muCaribbean, asi gare gare, panguva yekuyedzwa kwevhiki nevhiki, vamwe vevashandi vakabayiwa zvizere vakaedza kuti vane COVID-19.
Royal Caribbean Odyssey yeMakungwa 'yazvino rwendo rweCaribbean rwendo rwakanga rwakaoma mushure mekunge ngarava yamanikidzwa kudzokera kuFlorida kwenguva pfupi kuti iburutse mutyairi ane chiratidzo cheCCIDID-19 uye vaaive navo ipapo.
Royal Caribbean Ngarava itsva yeumbozha yakatanga kubva kuFort Lauderdale, Florida muna Zvita 18 rwendo rwehusiku husere hweCaribbean, asi gare gare, panguva yekuyedzwa kwevhiki nevhiki, vamwe vevashandi vakabaiwa zvizere vakaedza kuti vane COVID-19.
"Vanhu vepedyo vakaonekwa nekukurumidza, uye mumwe nemumwe akabva angovharirwa," Royal Caribbean Mutauriri akadaro, achiwedzera kuti vanhu makumi mashanu nevashanu mungarava vakabata hutachiona hweCOVID-55.
Kunyangwe nhamba iyi idiki - kune vafambi zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vari muchikepe - kubuda uku kwaireva kuti Curacao neAruba ports, uko Odyssey yeMakungwa vakaronga kumisa chikepe, vakabvisa chikepe.
"Sarudzo iyi yakaitwa pamwe chete nezvitsuwa uye nekuchenjerera kwakawanda, nekuda kwemaitiro aripo enyaya munharaunda dzekunoenda uye kuve neCCIDID-19-positive kesi mubhodhi ... inomiririra 1.1% yenharaunda," Royal Caribbean vakadaro muchitauriri.
The varaidzo purogiramu mubhodhi zvakaipa-fated Odyssey yeMakungwa yachinjawo, Royal Caribbean yakasimbisa, nepo US Centers for Disease Control and Prevention yakatanga ongororo.
Pakutanga kwedenda, zvikepe zvekufamba zvakasangana nekubuda kukuru kweCCIDID-19, ngarava zhinji dzichivharwa kupinda muzviteshi zvekufona.